China Canton Fair 2020 Mgbụsị akwụkwọ, China Import and Export Fair factory na ndị na-eweta ya | Huaihai Holding Group
Canton Fair 2020 Mgbụsị akwụkwọ, China Mbubata na mbupụ ngosi
Okpokoro: Dakọtara ihe owuwu a rụkọtara ọnụ iji mee ka ọpụpụ nke ihe dị na paịpụ site na usoro ịgbado ọkụ, belata oghere dị n'etiti ịgbado ọkụ na weld n'etiti ọkpọkọ, zere itinye uche, ike dị elu na ụdị nrụpụta siri ike na weld n'oge welding;
Ka anyị webata akụkụ n'ihu. Ugbu a anyị nwere ike ịhụ nkata dị n'ihu, ogwe ígwè ahụ dịka ọnụọgụ m n'obosara, ihe siri ezigbo ike. Nwere ike itinye akpa gị ma ọ bụ okpu agha na ya, dabara adaba. Ihe na-esote bụ ndụdụ ihu, anyị nwere abụọ n'ime anọ na - enye ya ihe dị ukwuu, dayameta bụ φ27mm, ọ bụ hydraulic, anyị na - etinye mmanụ hydraulic n'ime ya, nke a na - enye arụmọrụ mgbakasị ahụ dị mma, na - eme ka ị na - akwọ ụgbọala nke ọma ọbụna n'ọnọdụ ọjọọ. Ọzọkwa ị ga-ahụ egwu, ọ dị ezigbo mma ma dịkwa mma, na-egosi ọkwa dị elu maka akụkụ ahụ. Nke a bụ oriọna na - agbanye ọkụ, ha niile nwereAsambodo EEC. Ntinye nke nrụnye ahụ na-emezu ihe achọrọ nkeEEC. Nke a bụ tebụl akụrụngwa, anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ọrụ nke igwe aghụghọ a. Na mbu o nwere ghaa abu abu Maka agaba n'ihu, enwere ụdị ọsọ atọ dị iche iche idozigharị, nke a bụ bọtịnụ ịhọrọ oke, etiti ma ọ bụ nke pere mpe. Ma ọ bụrụ na anyị na-eji mgbagharị azụ, a ga-enwe mkpu iji dọọ ndị na-aga ije n'azụ gị aka. Anyị nwere ike ịhụ ozi ọsọ ọsọ na mita nke ikanam, ọ na - egosi ozi batrị, ozi ọkụ, ọsọ ugbu a yana ozi zuru oke. Ka m gosi gị.
Ugbu a, anyị na-achọ oche ahụ, dịka m kpọtụrụ aha na mbụ, ihe nkwonkwo na azụ na-abụkarị ergonomic, oche azụ siri ike na oche dị mma na ịnya ụgbọ ala dị mma. Oche nkwonkwo oche nke oche di ya na onodu uzo oche, o nwere ike ichetara ndi mmadu ka ịgbanyụ ikike mgbe ha puru n’ụgbọala, na -echebe nchekwa nke ọkwọ ụgbọ ala na ndị ọzọ. N'okpuru oche ahụ bụ batrị, batrị dị 60V na 32 AH na-enye ogologo 50km. Ka anyị hụ ngwa agha, anyị ji otu eriri na - agba agba na - eme ka ọ dị ike, nke siri ezigbo ike ma sie ike. You ga - ahụ ka anyị chepụtara akụkụ niile na ịtụle ndụ ndị mmadụ.Fada Canton Online
Ka anyị kwaga n’oche ndị njem, ọ karịrị oche oche ọkwọ ụgbọala ma dabara na nwanyị na nwatakịrị. Lee, enwere echiche anwansi, ka m gosi gị, oche ahụ apịalarị ugbu a, ka anyị bulie ihe nkwata ma kpughee ya, mgbe ahụ ọ bụrụ ngwongwo ibu, ọ dị ezigbo mma, ọ dị mma? Nke ahụ bụ nnukwu ebe ụgbọ ala a na-enwu, otu ụgbọ ala nhọrọ abụọ, kwụọ ụgwọ ego maka otu ụgbọ, mana ịnweta ụgbọ abụọ. Ọ dịghị onye ga-ajụ ya, nri? Canton Fair 2020
Akụkụ ikpeazụ bụ nkwusioru azụ, ihe owuwu ahụ bụ ịmịcha ujo n'ụdị mmiri, nye igwe ịnya ụgbọ ala. A na-eme anyụike azụ anyị, anyị na-ahọrọ ndị na-eweta ngwaahịa kachasị maka ngwaahịa mapụtara, yabụ enwere ike ịchịkwa mma ahụ nke ọma.
Ugbu a iwebata maka ihe nlereanya a agwụla, oge ọzọ bụ oge efu, ọ bụ oge gị ịkọrọ anyị ajụjụ gị na ihe ịchọrọ, mgbe ahụ mụ na onye enyemaka anyị ga-enye gị azịza n'oge.
Na-ebufe capaci127th Canton Fair
Ọ dị mma onye ọ bụla, ọ bịara na njedebe. Eletriki tricyclebụ ngwaahịa anyị kacha egosipụta, anyị nwere ahụmịhe bara ụba na R&D yana n'ichepụta ihe, ma mbupụ ya n'ime mba 86 n'ụwa. Ọ bụrụ n’ị amasị ngwaahịa anyị, egbula oge ijikọ anyị, biko zitere ndị kọntaktị gị ebe a, onye ọrụ ibe anyị ga-akpọtụrụ gị ma zitere gị nkọwa ndị ọzọ ugbu a.